Sahmin lagu sameeyey carruurta keli waddanka imaata ee la waayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sahmin lagu sameeyey carruurta keli waddanka imaata ee la waayo
La daabacay onsdag 27 januari 2016 kl 13.35
Inta badan carruurta iyo dhallinyarada waddanka imaata ee laga waayo xaruumaha la dejiyo waxaa la waayaa marka waddanka iska dhiibaan, intaan la billaabin gudo-galka kiisaskooda magangliyo.
Sidaas waxaa muujinaya warbaxin cusub oo Länssstyrelsen Stockholm dalbatay.
Amir Hashemi-Nik waa horumariya howlaha Länsstyrelsen Stockholm:
- Caruurta amaan xumo hadey dareemaan waxay kordhineysaa qatarta ah in la waayo, ayuu yeri.
Sahminta waxaa la sameeyey dayrtii sannadkii 2015ka iyadoo ay iska kaashadeen boliska, hey’adda socdaalka iyo waxda arrimaha bulshada. Warbaxinta sahminta ayaa muujineysa sawir ah caruurta la waayo kuwa ay yahiin iyo sababta caruurtas u dhuuntaan.
Carruurta iyo dhallinyarada la waayo badanaa waa wiilal, tirada ugu badana waa kuwo keligood ka yimid Morocko iyo Aljeeriya.
Qayb kale oo badan carruurtan la waayo waxay ka yimaadan Afghanistan, waddankas oo ah waddanka ugu badan ee caruurta iyo dhalinyarada qaxootiga ah ka yimaadaan.
Sannadkii hore waxaa la waayey 420 carruur iyo dhallinyaro waddanka kelinimo ku imaatay, kuwaas oo iskaga tagey goobtii markii ay waddanka iska dhiibeen la dejiyey. Sannadkii ka soo horeeyeyna tirada waxay aheyd 300 oo carruur iyo dhallinyaro ah.
Carruurta iyo dhallinyrada la waayo waddanka ayey sii joojan iyadoo qaar maagalooyinka waddanka u kalo socda, halka qaarkood waddanka iska baxaan. Carrurta kuwoda nugul waxay ugu jiraan in ay u gacan galaan qolyaha dadka ka ganacsada, ayuu lagu yeri warbaxinta sahanka.
Warbaxinta lagu soo bandhigay talooyin dhowr ah, waxaana ka mid ah goobaha la dejiyo la waafajiyo baahida carruurtan iyo dhallinyaradan, la hagaajiyo xiriirta carruurtan iyo dhallinyaradan la leeyahiin dadka waaweyn. Iyo in la hagaajiyo wado shaqeynta hey’adaha dowliga ah ee arrimahan quseyso.
Sida Länsstyrelsen Stockholm sheegtay hadda waxaa halkeeda laga sii wadayaa shaqada ah sidii xog iyo wananagsan arrimahan loogu yeelan lahaa si loo helo farsamooyin looga hortago kari carruurta dhallinyarada la waayo, maadaame hey’adda Qaramada midoobey ugu qaabilsan carruurta ay aad ugu dhaliishey arrimahan Sweden.
Ujeedadana waa in macluumaadka iyo aqtoon arrimahan loo leeyahay lagu baahiyo waddanka oo idil, ayuu yeri, säger Amir Hashemi-Nik oo horumarinta howlaha u qaabilsan Länsstyrelsen i Stockholm.
- Hadefka waa in laga hortago caruurta in la waayo.